အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga - it'salot more involved than it looks! - အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga
“ငါအရူးအမူးသကြားလုံးနှင့်အလှည့်ပတ်ပစ်သစ်တော်သီး, ငါကယ်ဆယ်ရေးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှလိုချင်ပါလျှင်ကျွန်မအနေနဲ့တိရိစ္ဆာန်အမိုးအကာဦးချင်ပါတယ်” ကောင်းစွာငါငါကလည်းတစ်ချိန်ကရှိစေခြင်းငှါယုံကြည်ကြဘူးတစ်ခုခုခဲ့ကြောင်း. သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့ဘုရင်ကစွန့်စားမှုအပျေါမှာစတင်ခဲ့တော့လျှင်သင်၌ရှိကြ၏သောအရာကိုအချို့စိတ်ကူးရှိစေခြင်းငှါ….ရုံ cheery အရောင်များနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး၏ချစ်စရာ critters အားဖြင့်အရူးလုပ်ခံရ dont…“ဒါဟာသူတို့ကဆိုပါတယ်ပျော်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်, သူတို့ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကို join! သင်ကဒီကိုချစ်လိမ့်မယ်ဂိမ်းမှာအလွန်ကြီးစွာသောများမှာ” သူရှိပါတယ်! ကောင်းစွာဟုတ်ကဲ့အဲဒါကိုပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်ထွက်လှည့်, ငါလျှင်တစ်ခုစွဲလမ်း '' ငါသည်ပင်တော့ဘူးပင်ကိုယ်ပိုင်အစစ်အမှန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမအောက်မေ့နိုင်ပါတယ်’ လမ်းမျိုး!
So if you’ve crushed your way throughatonne of candy and defied gravity to prove the aerodynamic aptitude of your Papa Pears and are ready for some more thrilling adventures then please join us on our voyage of discovery through the gnarly world that is home to the pet Rescue Saga. ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလုံခြုံစွာသူတို့ကိုကိုလည်းငုံ့အရောင်လုပ်ကွက်ရှင်းလင်းရေးအားဖြင့် screen ၏အောက်ခြေမှအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များခေါ်ခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျတူညီသောအရောင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော adjoining လုပ်ကွက်ကို click ရမယ်အဆိုပါလုပ်ကွက်ကိုရှင်းလင်းဖို့, ပိုလုပ်ကွက်အမှတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနှင့်ပိုမိုမြင့်မားရှင်းလင်း, နှင့်မြန်ကိုယ်တော်၏ဆင်းရဲသားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအောက်ဆုံးရောက်ရှိ.
တစ်ခုချင်းစီကိုအဆင့်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်ခုရည်ရွယ်ချက်များရှိပါတယ်; အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတစ်အချို့အရေအတွက်ကကယ်နှုတ်ခြင်းနှင့်မှတ်တဲ့အခြို့သောအရေအတွက်ကဂိုးသွင်း, လွယ်ကူသောညာဘက်! yeah ငါပထမဦးဆုံးများလွန်းမှာထင်ရဲ့! Now there are some funky boosters available that are definitely handy in clearing unwanted blocks, ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာ coiner ဘူး, ငါကကိုကြည့်ဘယ်လောက်နေပါစေငါဂိမ်းတစ်ခုကစားရန်ပေးဆောင်တရားမျှတနိုင်နှငျ့သတငျးကောငျးသငျသညျဖို့ရှိသည် dont ဖြစ်ပါတယ်လမ်းမရှိသော, အားလုံးအဆင့်ဆင့် Boosters ဝယ်ယူခြင်းမရှိဘဲပြည့်မီနိုင်ကြသည်…သင်သို့သော်ဘဝတွေကိုအဘို့သင်၏မိတ်ဆွေများတောင်းစားနှုနျးဖို့ရှိစေခြင်းငှါ!
သငျသညျမျက်နှာပြင်ကျမ်းလိပ်များကိုဆင်းလုပ်ကွက်ကွာရှင်းလင်းအဖြစ်, ယင်းလှည့်ကွက်မဆိုလုပ်ကွက်ဖြစ်ပါသည် (သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ) သင်သည်သူတို့၏နိဂုံးကိုမှကျဆုံးစေရန်ပေါင်းစပ်ထဲက run တဲ့အခါမှာ screen ရဲ့ထိပ်မှာ, နေရာလေးကိုသူတို့မလိုချင်တဲ့လုပ်ကွက်လျှင်, not so much when they are essential pets needing rescue. Score enough points in succession however and in some levels you are rewarded withafirecracker that can clear an entire vertical column of blocks, အလွန်အသုံးအမှန်ပင်! အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga ပျော်စရာအဘို့အတွက်ပစ်ချအနည်းငယ်လျောက်ပတ်သောပေါက်ကွဲသံနှင့်အတူမဟာဗျူဟာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု၏အခြားဂိမ်းအောက်ဆုံးလိုင်းဖြစ်ပါသည်. ငါ၏အအတန်ငယ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်နိဒါန်းအားဖြင့်မသိနိုင်ဖြစ်ကာမယူကြ…ငါရှိရဲ့ moment..so မှာလောက်မရှိတဲ့ခက်ခဲအဆင့်တွင်ဝန်ခံရမည်ဖမ်းဖြစ်ကြောင်းကို!
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga - it'salot more involved than it looks!, 6.6 out of 10 based on 10 ratings